White Tree Media Co., Ltd.
– Posted by WhiteTreeCompanyLimited
• Social Media & Digital Marketing သဘောတရားကို နားလည်ပြီး စာအရေးအသားကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
• English မှ မြန်မာဘာသာ(သို့) မြန်မာဘာသာမှEnglish သို့ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ရမည်။
• Facebook Marketing ကို ကျွမ်းကျင်စွာ သိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
* Email latest resume/CV to [email protected] *
Job Categories: Media & Advertising. Job Types: Full-Time. Job Tags: content writer. Salary: 300,000 - 500,000. 538 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ